देशै नरहे समृद्धि के कामको? हामिलाई समृद्धि चाहिएन सरकार हाम्रो भु-भाग जोगाईदे - AIM Khabar
गृह पृष्ठ > नेपाल समाचार > देशै नरहे समृद्धि के कामको? हामिलाई समृद्धि चाहिएन सरकार हाम्रो भु-भाग जोगाईदे
January 15, 2020 January 15, 2020 GRISHI425
“मन्त्रीमण्डल फेरबदल गरेर प्रमुख मुद्दा वाट ध्यान हटाउनु भएन । अहिलेको प्रमुख मुद्दा लिम्पियाधुरा हो । महाकाली पुल क्रस गरेर गड्डाचौकी सम्मा आईपुग्दा र मेची पुलको दुईतिहाइ भु-भाग लिई सक्दा सम्म पनि संबंधित निकाएको ध्यानाकर्षण हुन सकेको थिएन । अहिले सबै पक्ष एकजुट भएका छन । अब यो सिमा विवाद सधैका लागि अन्त्य गर्न सिमानाहरुमा पर्खाल लागाउने उचित समय आईसकेको छ। देशै नरहे समृद्धि के कामको? हामिलाई समृद्धि चाहिएन सरकार हाम्रो भु-भाग जोगाईदे,, ।
सिमा सम्बन्धि विवाद अहिले मात्र भएको होइन । सिमा सम्बन्धि विवाद वर्षौंदेखि हुँदै आईरहेको छ। जस्को जलन्त उदाहरण कंचनपुरको घटना हो । २०७३ साल फागुन २६ गते कंचनपुरको आनन्द बजार नजिक रहेको द्शगजा क्षेत्र भन्दा धेरै भित्र नेपालकै भुमरीमा नेपालीहरुले कलपठ बनाउन थाल्दा भारतले अनावश्यक दादागिरी देखाएर कलपठ बनाउन नदिए पछि नेपालीहरु भारतीय दादागिरीको प्रतिकारमा उत्रिए। भारतीय सिमा बलले स्थितिलाई समाल्नुको सट्टा दादागिरी देखाउदै गोलि प्रहार गर्न थाले। र नेपाली वीर सहिद गोभिन्द गौतम नेपाली भूमिको रक्षा गर्दागर्दै साहदत् प्राप्त भए । भारतले यस्तो दुव्र्यवहार गर्दा पनि तत्कालीन नेपाली सरकारले केही गर्न सकेन । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । देश भरिमा यस्ता कयौं ठाउमा नेपालीहरुले भारतीय दादागिरी सहेर बस्नु परिरहेको छ । नेपालीहरुले आफ्नो भुमिको रक्षा गर्न हरेक दिन कुनै न कुनै ठाउमा भारतीय फौजहरु संग लड्नु परिरहेको छ। चाहे त्यो मेची होस चाहे महाकाली ।
सुगौली सन्धि पछि हाम्रो सिमाना खुम्चिएर पुर्बमा मेची र पश्चिम महाकालीमा परिणत हुन हुन गएको हो भन्ने कुरा सबैलाई ज्ञातब्यनै छ। तर नेपालीहरुको विडम्बना अब मेची र महाकाली पनि भन्न नमिल्ने भो। किनकि मेची पुलको दुई तिहाइ भुभाग भारतले अतिक्रम गरि सकेको छ। जंगे पिल्लरहरुलाई दबाउदै, नयाँ पिल्लरहरु हाल्दै मेचीपुल र त्यसको छेउ छाउमा रहेको भु-भाग भारतले आफ्नो बनाई सक्यो । त्यस्तै महाकाली पुल जसको बिचमा केहि बर्ष अगिमात्रै नेपालको झणडा फरफराउथ्यो तर अहिले पुललाई मात्र होइन पुल भन्दा धेरै भित्र गड्डाचौको छेउछाउ सम्म भारत पुगिसकेको छ। त्यसै गरि कंचनपुरको दोधारा चादनिका धेरै भुभागहरुलाई भारतले नया पिल्लरहरुहाल्दै आफ्नो बनाईसकेको अवस्था छ । भारतको सिमानामा पर्ने कुनैपनी नेपाली भुभाग सुरक्षीत छैनन्।
सिमा विवाद अहिलेको प्रमुख समस्या हो र यसले विक्राल रुप लिईसक्दा सम्म पनि संबंधित निकाएको ध्यान जान सकेको छैन । सिमा विवाद नेपाल र नेपालीहरुका लागी क्यान्सर भैसक्दा पनि कसैले यस्को समाधानको उपाय खोज्ने प्रयास गरेका छैनन् । सिमा-विवाद त्यति ठुलो समस्या पनि होइन । यदि नेपालमा सच्चा रास्ट्रवादी र देश भक्त नेता जन्मेका भए आज नेपालीले आफ्नो सिमाना जोगाउनको निम्ति यत्रो आन्दोलन गरिराख्नु पर्ने थिएन र सिमानाको रक्षा गर्दा गर्दै सहिद हुनुपर्ने थिएन ।जति जोगि आएपनी कानै चिरेका भने झै : नेपालमा जति पनि नेता आए भारतकै सरणमा पर्ने भएका हुनाले मात्र नेपालको भु-भाग सुरक्षीत हुन नसकेको हो ।
सिमा विवाद समाधान नै नगर्न सकिने समस्या होइन । नेपालको सिमा विवादको प्रमुख कारण हो : ‘खुल्ला सिमाना’ । यदि सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण सिमानाको बैज्ञानिक मध्यमबाट पहिचान गरि, खुल्ला सिमानाको अन्त्य गरेर, आफ्नो सम्पुर्ण सिमानामा पर्खाल लगाउन सके मात्र नेपालको भुमी सुरक्षीत हुन सक्छ । र भारतले एक इन्च पनि भुमि मिच्न सक्दैन । तर यस्तो कोले गर्ने ? यसो गर्दा भारतीय नौटहरु बाट बन्चित हुने डरले गर्दा पनि अहिले सम्म कसैले यो कदम चाल्न सकेका छैनन् ।
मेची पुलको दुई तिहाइ भुभाग भारतले अतिक्रम गरि सक्दा सम्म, कंचनपुर गड्डाचौकीको छेउछाउ सम्म भारत आईपुग्दा सम्मपनि कसैको ध्यान जान सकेको थिएन । देशको बिर्सिएर सबै पेटमै मक्ख थिए । बल्ल लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भारतले आफ्नो नक्सामा देखाए पछी सबैको ध्यान गयो । तर यो समस्याको समाधान हुन नसक्दै नेपाल सरकारले मन्त्रीमण्डल फेरबदल गरेर जनताको ध्यान भडकाउन खोजेको प्रयासमा केहि हद सम्म सफल भएको देखिन्छ । अहिले सबैको ध्यान मन्त्रीमण्डल तिर गएको देखिन्छ। अहिलेको हाम्रो प्रमुख मुद्दा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी हो । सरकारले यो मुद्दा बाट ध्यान हटाउनु भएन । सरकारलाई र संबंधित निकाएलाई दबाब दिन र सिमा बिबादलाई सधैकाली अन्त्य गर्न एक चोटि होइन सिमाविवादको दीर्घकालीन समाधान ननिकाल्दा सम्म सबै थोक छोडेर यश महान अभियानमा सबै देशभक्तहरुले होमिनको एकचोटि फेरि होमिनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
हाम्रो भुमिलाई जोगाउने र सिमा विवाद सधैका लागि अन्त्य गर्ने सहि समय यही हो सरकार । देशै नरहे समृद्धि के कामको ? हामिलाई समृद्धि होइन सरकार हाम्रो प्राण भन्दा प्यारो देशको भुभाग जोगाई दे । अहिले सम्म कसैपनि सरकारले गर्न नसकेको काम गरेर देखाई दे । सिमानामा पर्खाल लगाएर देखाई दे । जब जब र जहाँ जहाँ कम्युनिस्ट सरकार भएका छन त्यहा चमत्कार भएको छ भन्ने कुरालाई साबित गरेर देखाई दे ।
रेल तानेर बिश्व रेकर्ड
March 22, 2019 March 25, 2019 Raju Thapa